Alaab -qeybiyeyaasha Awoodda & Warshadda - Soo -saareyaasha Awoodda Awoodda Shiinaha
Isku -xirka Awooda Korontada ...
Iskuxirayaasha baabuurta korontada warshadaha-DC50
Naqshadeynta isku xirka hagidda oo leh xoog gilgilasho hooseeya oo jilicsan
Iska -caabbinta xidhiidhka oo hooseeya iyo awoodda tabinta ee hadda jirta
Gariirka Anti iyo resistanc saamaynta xoog leh
Dusha taabashada qaanso siman iyo isku -halaynta xiriirka firfircoon ee firfircoon
Dahaarka sare, iska caabbinta iyo iska caabbinta heerkulka sare
Xidhiidhiye qaybsan, dabacsan
Naqshadeynta qaab dhismeedka guga oo horumarsan, isku -haynta xiriirka firfircoon ee firfircoon
Caadiyan loo isticmaalo warshadaha
Xiriiriyaha DCL-1 waa badeecad gaar ah oo loogu talagalay is-dhexgalka awoodda, taas oo gabi ahaanba lagu beddeli karo badeecooyin la mid ah isla warshadaha.
Badeecadani waxay qaadataa naqshadaynta rakibidda sabaynaysa, taas oo loo adeegsan karo baalal indho la 'oo ku dhex yaal korontada. Xulashada alaabta wax lagu xiro ee alaabta la xiriirta waa dabacsanaanta sare iyo naxaas beryllium ah. Adigoo adeegsanaya qaab cawsduurka ah, waxay leedahay astaamaha dusha taabashada laastikada oo siman, waxyeello ma gaarsiiso dusha sare ee gelinta, iyo dusha sare ee xiriirka waa la dammaanad qaadi karaa. Sidaa darteed, isku xiraha isticmaalaya cawsduurku wuxuu leeyahay iska caabin xiriir oo hooseysa, kor u kaca heerkulka oo hooseeya, iyo awoodda qaadista gariirka iyo gariirka, sidaa darteed badeecadda la adeegsanayo qaab cawsduurku waxay leedahay isku -haleyn xiriir firfircoon oo firfircoon.
Soo koobid: TJ38-1 isku xiraha korantada korontada wuxuu leeyahay astaamaha isku xirnaanta la isku halleyn karo, furaha jilicsan, iska caabinta xiriirka oo hooseeya, culayska sare ee hadda jira iyo waxqabad aad u fiican. Caaga isku xiraha modulu wuxuu ka samaysan yahay UL94 v-0 oo ah qalab heer sare ah oo aan dabka lahayn. Cawsduurka qaybta xiriirka waxaa laga sameeyey dabacsanaan sare iyo naxaas beryllium ah oo xoog badan oo lagu dahaadhay lacag, taas oo dammaanad qaadaysa isku -halaynta firfircoon ee firfircoon ee badeecadda.
Beddel Amphenol/Amphenol PT Power Connectors
Beddel TE ET (ELCON) Xidhiidhiyayaasha Awooda
Ku beddel Te 2042274-1 Xiriirada Codaynta
Beddel Te 2042274-2 Adigoon Laxiriirin Xiriirada
1. Illaa 35Amps xiriir kasta
2. Sargaal-dhammaad ilaa dhammaad
3. Muuqaal hoose, oo ka yar 8 mm oo ka sarreeya PCB
4. Codsiyada Cable-to-PCB
5. Haysashada saxan saxan
6. Xagasha qumman iyo tiirarka toosan
1. Shaqaynta Hadda 35A, waxaa loo heli karaa siligga isku xirka siligga.
2. Godka waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro PCB oo 8mm ka yar.
3. Jihada alxanka = mid toosan iyo mid toosan
4. Midabka guryaha = Madow
5. Malaa'igta rakibidda = mid toosan iyo mid toosan
6. Waxay waafaqsan tahay habka alxanka ee aan lahayn leedhka, ilaa la ruxruxo 265 ° C,
7. La kulan heerka ELV iyo RoHS
8. Inaad la jaanqaaddo Xidhiidhiyayaasha Awoodda ET:
A. Qaybta maya. : 1982299-1, 1982299-2, 1982299-3, 1982299-4, 1982299-6,2178186-3, 2204534-1, 2173200-2, 2178186-3,
B. Qaybta Maya ee 90 ° godka: 1982295-1, 1982295-2,
C. Qaybta Maya ee godka 180 °: 2042274-1, 2042274-2,
D. Inaad la jaanqaaddo isku xiraha Amphenol PT Power: C-PWR-MRA0-01, PWR-FST0-02, PWR-FST0-01, PWR-MRA0-01, C-PWR-FST2-01 ；
E. Si aad si fiican u beddesho: Qaybta Ericsson maya .: RPV 447 22/001/RPV 447 22/501.
DJL150 isku xiraha moduleka korontada warshadaha wuxuu leeyahay astaamaha isku xirnaanta la isku halleyn karo, garaacyada jilicsan, iska caabbinta xiriirka oo hooseysa, culayska sare ee hadda jira, waxqabad aad u fiican, iwm, oo wuxuu gudbiyay shahaadada badbaadada UL (E319259), taxanaha alaabadaani waxay qaadanayaan tikniyoolajiyadda horumarsan joodariga gu’ga -rogaha ah ee joodariga gu’ga sida xiriiriyaha, sidaa darteed waxay leedahay isku -haleyn xiriir firfircoon oo firfircoon.
Xidhiidhiyaha Awoodda Module DJL125
DJL125 isku xiraha moduleka warshadaha wuxuu leeyahay astaamaha isku xirnaanta la isku halleyn karo, garaacyada jilicsan, iska caabbinta xiriirka hooseysa, hadda culeyska sare leh, waxqabad aad u fiican, iwm, oo wuxuu dhaafay shahaadada badbaadada UL (E319259), taxanahan alaabada ah waxay qaadataa tikniyoolajiyadda horumarsan joodariga gu’ga -rogaha ah ee joodariga gu’ga sida xiriiriyaha, sidaa darteed waxay leedahay isku -haleyn xiriir firfircoon oo firfircoon.
Xidhiidhiyaha moodeelka DJL75 wuxuu leeyahay astaamaha isku-xidhka la isku haleyn karo, garaacyada jilicsan, iska-caabbinta xiriirka oo hooseeya, culayska sare ee hadda jira iyo waxqabad aad u fiican.
Xidhiidhiyaha modulkani wuxuu qaataa teknolojiyadda horumarsan ee caleen hal wareeg ah oo jaakad guga silig laba gees leh leh iyo jaakad guga taajka oo ah qaybaha xiriirka, si badeecadu u leedahay isku-halayn xiriir firfircoon oo firfircoon.
DJL taxanaha isku xiraha korantada korontada ayaa isku xira badeecooyin gaar ah, iyo kuwa isku filta ah ee isla badeecadaha si buuxda isku beddeli kara, iyo sanadkii 2011 waxay dhaafeen shahaadada badbaadada UL (E319259) taxanaha alaabtan waxay qaateen teknolojiyadda horumarsan ee hyperboloid -ka hal xaashi nooca god god guga iyo godka jaakada si aad ula xiriirto, markaa badeecadu waxay leedahay isku -haleyn xiriir firfircoon oo firfircoon.
Xidhiidhiyaha Awoodda Module DJL37
ELCON hi isku xiraha khaanadda hadda jira ayaa lagu qiimeeyay hadda 35Amp ku dallacaya UPS signal power use connector18pins DJL18
Awoodda Anen waxay soo saareysay isku -xire khaanad sare oo aad u sarreeya tan iyo 2006. Isku -xiraha wuxuu taageeri karaa hadda laga bilaabo 25Amp ilaa 125Amp. Awoodda iyo signalada ayaa labaduba isku jira hal kiis.
Iyada oo leh saldhigyo guga oo tayo wanaagsan leh iyo biinanka dahaarka leh ee lacagta ah. Waxay hubisaa isku -halaynta xiriirka.
Tilmaamaha sida hoos ku qoran:
Xiriir lagu kalsoon yahay,
Gelinta iyo saarista jilicsan,
Xoog galinta hoose,
Iska caabin xiriir hoose,
Xamuul aad u sarreeya iyo waxqabad aad u fiican.